VAHAOLANA - Shanghai Weyer Electric Co., Ltd.
Weyer PA6 na PA12 conduits ary ireo fitaovana mifandraika amin'izany WQG, WQGM, WQGDM dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny lalamby. Ireo vokatra ireo dia manana toetra tsara fanoherana ny afo, tsy misy halogen, phosfor ary cadmium. Izy ireo dia voamarina ny fenitra eropeana sy iraisam-pirenena momba ny afo sy ny setroka, EN45545-2, R22 / R23.
Ny iray amin'ireo tsenantsika lehibe dia ny ascenseur. Tao anatin'izay taona lasa izay dia nitombo haingana ny indostrian'ny ascenseur. Weyer fantsom-bozaka sy fantsom-pifandraisana mahazatra ary mahazatra dia manana andraikitra fiarovana amin'ity orinasa ity. Izy ireo dia anti-afo, fahanterana miady amin'ny hafanana, manana fiarovana IP68 na IP69k tsara. Nahazo laza malaza avy amin'ny mpanjifa ascenseur izahay eto an-toerana sy any ivelany.
Fiara mpitondra herinaratra vaovao
Dimy taona lasa izay, niely be tany China ny fiara mpitondra angovo vaovao. Nanampy ireo mpanjifa namolavola ny vahaolana fiarovana izahay. Ny fantsom-pifandraisan'ny EMC manokana sy ny mpampifandray M23 dia voaray ary nampiasaina tanteraka. Ankehitriny dia mbola mandray anjara amin'ny famolavolana ny tetikasa iraisam-pirenena ho an'ity faritra ity izahay.
Angovo azo havaozina be mpampiasa eran'izao tontolo izao, ny tetikasa angovo azo avy amin'ny rivotra dia mangataka vahaolana fiarovana lehibe. Ny fantsom-pandrefesana mekanika avo lenta sy ny fantsom-bolan'ny tariby dia afaka mifanaraka amin'ny haavon'ny tetikasa. Ny fantsonay, ny fihary ao dia napetraka ao amin'ny lozisialy, boaty fanaraha-maso ny mari-pana, propeller hafainganana hafainganam-pandeha sy vatana tilikambo.
Ny rafitra fiarovana Weyer toy ny lakan-drano sy ny karazana mpampitohy misy kofehy dia miaro ny karazana masinina ao amin'ity orinasa ity. Ny vokatray dia be mpampiasa amin'ny Port Facility, milina paraky, milina tsindrona, milina mekanika, ary fitaovana milina sns.
Ny jiro indostrialy koa dia indostria manan-danja andraisanay anjara. Ny vokatra Weyer dia nahafa-po ny maro tamin'ny mpanjifantsika amin'ny faritra samihafa amin'ny fampiasana Jiro. Izahay dia namorona vokatra manokana toy ny fantsom-panafana sy ny fihary hafanana, ny vokatra V0 manohitra ny afo ary ny fantsom-pahanterana hafanana araka ny mahazatra OC / T29106
Ny rafitra fiarovana Weyer dia tsy ampiasaina amin'ny terminal terminal elektrika fotsiny fa koa amin'ny tsipika famokarana mandeha ho azy sy ny robot. Ny elanelana feno amin'ny fantson-drano sy ny mpampitohy dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny indostria tsirairay. Ny glandesantsika dia nandalo ny fanamarinana ATEX & IECEx ho an'ny faritra mampidi-doza.
Izao dia ny vanim-potoana 5G. Manaraka ny fotoana hatrany izahay. Ny fantson-tsolika Weyer polyamide sy ny fihenan'ny rivotra vent dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny tetikasa fifandraisana. Ny vavantsika dia afaka mitazona ny fikorianan'ny rivotra avo lenta handanjalanjana ny rivotra mafana sy ny rivotra mangatsiaka ao anatiny na ivelan'ny boaty ary afaka miaro tariby amin'ny rano sy vovoka (IP67).